अन्डा शाकाहारी नै रहेको बिज्ञानको निष्कर्ष !
स्वास्थ्य : कुखुरी पहिले जन्मियाे कि अन्डा ? यो प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ। अब अर्को प्रश्न थपिएको छ, अन्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ?हामी यस प्रश्नमा धेरै अलमलिन्छौं । किनभने यो आफैंमा मासु जन्य होइन।
किनभने यो पनि जनवारले दिने हो।अब तपाईं भन्नुहुन्छ कि, अन्डाबाट बच्चा पैदा हुन्छ। तर, बजारमा पाइने अन्डा अनफर्टिलाइज्ड हो। अर्थात् त्यसबाट कहिले पनि चल्ला पैदा हुँदैन।
हुनै सक्दैन।अब भने यो विवादलाई विज्ञानले सफाइ दिएको छ।विज्ञानले भन्छ, अन्डा शाकाहारी नै हो। रिसर्च अनुसार अन्डाको सेतो भागमा केवल प्रोटिन हुन्छ। त्यसमा मासुको कुनै अंश हुँदैन।
२०७८ श्रावण ३०, शनिबार १८:४८ गते0Minutes 613 Views